Ihe niile ị chọrọ ịma banyere oke Roche | Netwọk Mgbasa Ozi
Satellite anyị, Ọnwa, dị na nkezi nke kilomita 384.400 site na Earthwa. Kwa afọ, ọ na-ewepụ centimita 3,4. Nke a pụtara na ọnwa ole na ole gafere, ọnwa nwere ike ịkwụsị ịbụ satịlaịtị anyị. Ọ́ bụrụkwanụ na ọnọdụ ahụ dị iche? Nke ahụ pụtara, ọ bụrụ na ọnwa ntakịrị na nso ụwa anyị nso kwa afọ. Eziokwu a maara dị ka Roche ịgba. Kedu ihe oke Roche a bụ?
N’isiokwu a anyị kọwara ihe niile gbasara ya.
1 Ọ bụrụ na ọnwa abịarute nso na mbara ụwa anyị
2 Mmetụta ike ndọda na oke Roche
3 Roche oke na mmadu
Ọ bụrụ na ọnwa abịarute nso na mbara ụwa anyị
Nke mbu, ekwesiri ikwuputa na nke a bu ihe omuma. Ọ dịghị ọnwa ọ bụla iji bịaruo ụwa anyị nso, ya mere, ihe a nile bụ echiche. N'ezie, n'eziokwu, ọnwa ga-aga n'ihu na-agawanye n'ihu na eachwa kwa afọ. Ka anyị laghachite n’oge mgbe ụwa anyị ka mebere ọhụrụ yana ihe ọhụụ nke igwe anyị nwere dị nso karịa nke ugbu a. N'oge a, ọdịiche dị n'agbata mbara ala na satịlaịtị pere mpe. Na mgbakwunye, rotwa tụgharịrị na onwe ya na ngwa ngwa. Bọchị ndị ahụ dị naanị awa isii, ma ọnwa were nanị ụbọchị 17 iji mechaa orbit.
Ike ndọda nke mbara ụwa anyị na-eme n’elu ọnwa bụ ihe na-eme ka ọ kwụsịlata ntụgharị ya. N'otu oge ahụ, ike ndọda nke ọnwa na-eweta na mbara ala anyị bụ ihe na-eme ka ntụgharị ya na-ebelata. N'ihi nke a, ụbọchị taa n'ụwa bụ awa iri abụọ na anọ. Site n'ịnọgide na-agbasi ike nke usoro, ọ bụ ọnwa nke na-agbara anyị ọsọ iji kwụghachi ụgwọ.
Ichebe oge angular bu ihe di nkpa ijigide na uzo abuo. Ọ bụrụ na ọnwa ewere ihe karịrị otu ụbọchị iji gbaa ya gburugburu, mmetụta ya ga-adị ka anyị na-ahụ n’ebe a. Nke ahụ bụ, ngbagharị ụwa na-ebelata ma satịlaịtị na-agagharị iji kwụọ ụgwọ ya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọnwa na-agagharị na ngwa ngwa ọ ga - ewepụta ihe dị iche: okirikiri ụwa ga-eme ngwangwa, ụbọchị ga - ewe obere oge ma satịlaịtị ga - abịarukwu nso iji kwụọ ụgwọ.
Mmetụta ike ndọda na oke Roche
Iji ghọta nke a, ọ dị anyị mkpa ịmata na ike ndọda na-esiwanye ike ma ọ bụrụ na anyị abịaruo nso. E nwere otu ebe mmekọrịta nke ike ndọda niile dabara. A maara oke a dịka njedebe Roche. Ọ bụ banyere mmetụta ihe nwere mgbe ihe ike ndọda ya kwadoro ya. N'okwu a, anyị na-ekwu maka ọnwa. Ọ bụrụ na ọnwa dị nso na ihe ọzọ nke na ike ndọda nwere ike mechaa deformị na ibibi ya. Nke a Roche ịgba metụtakwara kpakpando, asteroids, mbara ala na Satellites.
Kacha nso anya na-adabere na uka, size na njupụta nke ma ihe. Iji maa atụ, oke Roche n’etiti ụwa na ọnwa bụ kilomita 9.500. A na-elebara nke a anya site n'ịgwọ ọnwa nkịtị site na nke siri ike. Oke a pụtara na, Ọ bụrụ na satịlaịtị anyị dị kilomita 9500 ma ọ bụ karịa ma ọ bụ karịa, ikike ike ụwa anyị nwere ga-eweghara nke ya. N'ihi ya, ọnwa ga-aghọ mgbanaka nke ihe onwunwe, na-agbawa kpam kpam. Ihe ndị a ga-aga n'ihu na-agbagharị gburugburu ụwa ruo mgbe ha kwụsịrị ịdaba n'ihi mmetụta nke ike ndọda n'elu. Enwere ike ịkpọ ihe ndị a meteorites.
Oburu na kometu no n ’ebe di anya na ala erughị puku kilomita iri na asatọ (18000), ọ ga - eme ka ike ndọda ghawaa. Anyanwụ nwere ike ime otu ihe ahụ ma ọ ga-enwe nnukwu ebe dị anya. Nke a bụ n'ihi oke anyanwụ ma e jiri ya tụnyere ụwa anyị. Otu ihe ihe n’ibu, ihe ike ndọda karịrị akarị. Nke a abughi nani tiori, ma nbibi nke igwe site na mbara ala ha bu ihe gha eme n'ime anwụ. Ihe atụ a kacha mara amara na nke a bụ nke Phobos, satịlaịtị na-agagharị gburugburu ụwa Mars nakwa na ọ na-eme ya na ọsọ ọsọ karịa ka mbara ala na-eme n’onwe ya.
N'ime oke Roche, ọ bụ ike ndọda nke ihe pere mpe nke na - enweghị ike ijikọ usoro ya ọnụ. Yabụ, ka ihe a na-erute oke njedebe nke isi ụlọ ọrụ Roche ka ikike nke ike ndọda ụwa na-emetụta. Mgbe ọ gafere ókèala a ọtụtụ nde afọ site ugbu a, satịlaịtị ga-aghọ mgbanaka nke iberibe iberibe na Mars. Ozugbo iberibe niile ahụ na-agba ọsọ ruo nwa oge, ha ga-amalite ikpo mmiri na mbara ala.
Ihe atụ ọzọ nke ihe nwere ike ịdị nso na njedebe Roche, ọ bụ ezie na amabeghị ya nke ọma, bụ Triton, Satellite kachasị ukwuu na mbara ụwa. Neptune. A na-eme atụmatụ ma ọ bụ ihe na-erughị ya na n'ihe dị ka ijeri afọ 3600, ihe abụọ nwere ike ime ka satịlaịtị a na-abịaru nso njedebe Roche: o nwere ike ịdaba na mbara ụwa ebe ọ ga-agbasasị ma ọ bụ ọ ga - aghọ ụyọkọ mpempe akwụkwọ nke ihe yiri mgbaaka nke ụwa nwere Saturn.
Roche oke na mmadu
Enwere ike ịjụ anyị ajụjụ a: gịnị kpatara na ụwa anyị anaghị ebibi ya na ike ndọda ya na-eche na anyị nọ na oke Roche? Ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume na ọ nwere ike ịbụ ihe ezi uche dị na ya, ọ nwere azịza dị mfe. Ike ndọda na-ejide ozu nke ihe nile dị ndụ ọnụ n’elu ụwa.
Mmetụta a enweghị isi ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere njikọkọ kemịkal na-ejikọ otu ahụ dum. Dịka ọmụmaatụ, ikike nke njikọ kemịkalụ dị na ahụ anyị nwere siri ike karịa ike ike ndọda. N’ezie, ike ndọda bụ otu n’ime ikike ndị na-esichaghị ike n’ime ihe niile dị n’eluigwe na ala. A ebe ebe ike ndọda na-arụ ọrụ nke ukwuu ga-adị mkpa, dịka na a nwa onu dị ka a ga - eme ka Roche belata nwee ike imeri ikike ijikọ ahụ anyị.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oke Roche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Roche ịgba